Izay Tantarain’Ireo Salvadoriana Blaogera Mikasika Ny Fahafatesan’Ilay Vavolombelona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Aogositra 2017 5:20 GMT
Mety ho tsy naharaka tantara ianareo raha toa ireo gazety salvadoriana no tena loharanom-baovaonareo. Maty tamin'ny 16 Martsa 2007 ilay hany tokana velona tamin'ny fandringanana ireo sivily nandritra ny ady sivily tao Salvadaoro. Ny 6 Desambra 1981, i Rufina Amaya dia nahavita nandositra an'ireo tariky ny governemanta izay, nisambotra sy namono tamin'ny fomba feno habibiana ireo antitra, vehivavy, lehilahy, ankizy ary zazakely tao an-tanànany, anisan'izany ny zanany vao 8 volana monja nalaina teny an-tànany. Io heloka an'ady io, izay fantatra tamin'ny anarany hoe fandringanana tao El Mozote, dia niteraka ny fahafatesana olona efa maherin'ny 1000 tao an-tanànan'i El Mozote, faritanin'i Morazan sy ny manodidina azy.
Fa ny governemanta Salvadoriana sy ny governemanta Amerikàna izay nanohana ny fitondrana tamin'ny taona 1981, dia nandà fa tsy nisy ny fandringanana ireo sivily. Taorian'ny ady, nohamarinin'ny Kaomisiona mikasika ny Fahamarinana avy amin'ny ONU ireo antsipirihany, tahaka izay natao tamin'ireo fanadihadiana nifandraika taminy. Taty aoriana, notaterin'ny mpanao gazety Mark Danner tamin'ny antsipirihany ilay fandringanana sy ireo fandavana nifanesy.
Nisy feo iray, izay niteny ampahatsorana sy ampanetren-tena tahaka ny feonà vavolombelona, nony farany, nahafantarana ny fahamarinana. Feon'i Rufina Amaya izay.
Mifanohitra tanteraka amin'ireo lohateny goavana tamin'ny gazety Salvadoriana, nanome voninahitra goavana an'i Rufina Amaya ireo blaogera.Marobe ireo nilaza ho nahafantatra manokana an'i Rufina. Nosoritan'i Jorge Avalos blaogera mpanao gazety toy izao izy:
vehivavy iray fatra-mpanetry tena fantatro. Vehivavy iray nandresy tamin'ny alàlan'ny teniny ireo lainga sy karazana herisetra feno habibiana mba hampahatsiahivana antsika ny herin'ny fahatsiarovana sy ny fahamarinana.
Ireo sasany, toa an'i Laura Mpirotsaka an-tsitrapo irayy avy amin'ny Corps de la Paix, mitantara ny fihaonany tamin'i Rufina ary nihaino azy nitantara ny tantara. Nangonin'i Ixquic ny lisitra misy ireo rohy mankany amin'ireo lahatsoratra am-bilaogy marobe izay nitanisa ny tantara. Iray tamin'ireny ny blaogin'i Meg, izay nitantara ny fihaonany tamin'i Rufina tamin'ny volana Febroary 2006:
Nihaona tamin'i Rufina aho androany, ary voalohany no nijereko ireo masony, tamin'ny fahafantarana fa hijanona hifamatotra ny foko sy ny azy. Tsy azoko antoka hoe hahavitra ny tsy hisaina azy aho raha vao mieritreritra ny tantaran'i Salvadaoro manomboka anio. Nandritra ny namakivakiako an-tongotra ireo lalam-be tamin'ity tanàna kely avaratra-atsinanan'i El Salvador ity, tsy maintsy nitadidy ny hifoka rivotra lalina aho, mba tsy hitomany, tamin'ny fanatrehana ny tena zava-misy izay niainan'io Rufina io fahiny.
Ireo hafa namela an'i Rufina vavolombelona hiteny irery. Ny andro maromaro taorian'ny fahafatesany, nandefa ireo lahatsoratra manontolo mikasika ny fitantaràna nataon'i Rufina ireo blaogy. Ary azo notanterahina tsara ny nihaino sy nijery an'i Rufina tao anaty lahatsarin'ny YouTube.
Farany, maro ireo nahatsikaritra marika iray matanjaka teny amin'i Rufina Amaya. Hoy ny mpanoratra sady mpanao blaogy, Juan Jose Dalton, tao anaty blaoginy
Tsy nandao ny faritra manodidina an'i Morazan mihitsy i Rufina. Niery tao amin'ireo tobin'ny mpitsoa-ponenana izy, tao amin'ny sisintany nanelanelana n'i Honduras sy Salvador ; izy no nahandro ny sakafon'ireo mpiady anaty akata ary taorian'ny ady (1992), izy no anisany iray tamin'ireo mpamorona ny vondrom-piarahamonina Segundo Montes, toerana izay handevenana azy. Navelany ho vavolombelona hitoetra ho an'ireo Salvadoriana ny fijaliany, nefa ihany koa sahala amin'ny marika sy famantarana maharitra mikasika ny ady ho an'ny rariny.
Nanao ity fanomezam-boninahitra azy ity i Nora Mendez tao amin'ny blaoginy:
25 taona niainana tanaty fangirifiriana isanandro i Rufina, tsy nisy fitsaharana, fitantarana tantara amin'ny fomba tokana nananany no mba hanazavana io fandringanana io, izay natao tamin'ireo zanany, ireo namany ary ireo mpifanolo-bodirindrina taminy. Tsy mba nisy olona, na iray aza, niala tsiny taminy akory, tsy nisy naka ny heviny ireo tao amin'ny sehatra ambony matanjaka tamin'ny fotoana nanombanana ny zava-misy mikasika ireo niharam-boina rehefa vita ny ady. Saingy nentin'ireo media maro isan-karazany ny feon'i Rufina, ho eny an-tsofin”ireo salvadoriana an'arivony, ny sasany tamin'izy ireo tsy nahatakatra saingy ireo hafa kosa nahazo azy, satria voakasiky ny zava-misy tsotra koa noho izy ireo niaina teny ambanivohitra, mahantra, tsy misy mpiahy.
Finalement, dans un hommage convenable à la mémoire que Rufina Amaya a cherché à préserver, un billet sur le blog de Chichicaste a fourni une liste des victimes du massacre de EL Mozote et de leurs âges. ……………….Farany, tao anatin'ny fanomezam-boninahitra sahaza ho fahatsiarovana an'i Rufina Amaya izay nikatsaka hitahiry, lahatsoratra iray teo amin'ny bilaogin'i Chichicaste no nitondra lisitra iray ahitàna ireo niharam-boina tamin'ny fandringanana tao El Mozote ary misy ireo taonany avy.